Namaste Karnali » दलितहरु कहिले सुरक्षित हुने ? दलितहरु कहिले सुरक्षित हुने ? – Namaste Karnali
दलितहरु कहिले सुरक्षित हुने ?
देश अहिले संघियतामा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राज्यसंयन्त्र संचालनका नयाँ बिधि पद्दतिहरु प्रयोग भईरहेका छन् । यद्यपि दलितमाथि अन्यायपुर्ण र अमानविय घटनाहरु घट्ने श्रृङ्खला झन चुलिदै गएको छ ।
१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १०:२१ प्रकाशित